Manampahefana mitady trano | Martech Zone
Sabotsy 19 Novambra 2011 Alahady, Novambra 20, 2011 Douglas Karr
Mpanohana hatry ny ela aho fikarohana Optimization nandritra ny fotoana elaela, fa ny zavatra niainako manokana vao haingana miaraka amin'i Martech dia nanakana ny fientanam-po nataoko tamim-pahatsorana. Nieritreritra aho taloha fa ny SEO no fitaovana mety indrindra hampitomboana ny fifamoivoizana satria zavatra azonao fehezina izany. Marina izany amin'ny lafiny iray, saingy afaka mitondra anao hatrany amin'ny habetsaky ny fikarohana lohahevitra iray ianao. Hitako fa rehefa nahatratra ny laharana avo indrindra izahay dia matetika no tsy dia nisy vokany izany. Very ny finoako ny laharan'ny habetsahan'ny karoka nataon'i Google ary very ny finoako ny ezaka takiana mba hahazoana toerana tsara kokoa.
Midika ve izany fa hiala amin'ny SEO aho? Tsia. Ny dingana voalohany raisiko amin'ny mpanjifa tsirairay dia ny fiantohana fa ny atiny dia natsangana tamin'ny sehatra namboarina, fa natsangana araka ny tokony ho izy ny lohahevitr'izy ireo, ary fantatr'izy ireo ny teny lakile sy ny fifaninanana. Ny nataoko dia naka ezaka fanampiny ary nanosika azy ho amin'ny fampiroboroboana fa tsy fanatsarana. Tsy miresaka rohy miverina aho… izay tena very hery eo amin'ny sehatry ny asa. Miresaka momba ny fampiroboroboana atiny mahafinaritra aho - miaraka na tsy misy rohy - amin'ny alàlan'ny fantsona haino aman-jery sy sosialy.
Ny orinasa iray dia afaka mametraka backlinks an-jatony mandritra ny taona ary mbola tsy mahatratra ny laharana izay mitondra fivezivezena mifandraika amin'izany. Na izany aza, raha toa ka nampihatra ezaka mitovy amin'izany ny orinasa amin'ny fanoratana atiny tsy mampino, fampiroboroboana ary famoahana an'io atiny io, hitantsika ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika mifandraika amin'izany… ary ny tahan'ny fiovam-po manaraka ihany koa. Fanambarana lalina kokoa avy amiko ny ahy… Mieritreritra aho search engine optimization dia efa indostria efa ho faty. Raha tsy misy hafa dia voaisa ny androny.
Ity infographic avy amin'ny Fepetra mitsangana miresaka ireo dingana raisin'ny orinasa hananganana ny fahefan'ny tranonkala. Manentana anao aho mba tsy hiraharaha ny ampahany amin'ny motera fikarohana ary hiasa fotsiny amin'ny fananganana atiny lehibe sy hampiroborobo azy amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana izay manangana fahefana… Amin'ny fikarohana tsy misy fikarohana!
Internet Marketing Infographic by Fepetra mitsangana.
Tags: fahefanafahefana manorinafikarohana Optimizationfanatsarana ny fikarohanaSEO
19 Nov 2011 tamin'ny 8:46 PM
Talanjona foana aho amin'ireo tranonkala lehibe indrindra hitako fa tsy manana bilaogy amin'izy ireo.
Indrindra ho an'ny orinasa madinidinika sy salantsalany, ny Blogs dia làlan'aina iray.
Enga anie ka hianatra izy ireo!
20 Nov 2011 tamin'ny 2:17 PM
Vao tsy ela akory izay no namakiako fa latsaky ny 30 isan-jaton'ny orinasa no manana bilaogy (heveriko fa kely kokoa aza angamba). Amin'ny faran'ny ambaratonga hafa, manodidina ny 70 isan-jaton'ny orinasa Fortune no manana bilaogy. Efitra amina taonina maro ho an'ireo orinasa afaka manoratra atiny lehibe hahafahany manatsara ny faran'ny farany.
22 Nov 2011 amin'ny 12:48 maraina
Nanoratra atiny ho an'ny tamba-jotra sosialy aho. Ny ekipa teknolojia dia maniry SEO bebe kokoa, teny fanalahidy betsaka kokoa (tsia, vao tsy ela akory izay, saingy fantatro ny antony ieritreretanao izany), fanandramana tsy mahomby kokoa hamitahana ny motera fikarohana.
Ny tanjoko dia ny hampiditra atiny vaovao 2-4 isan-kerinandro, na teny 300 na teny 3000 tsy maninona - ny hany zava-dehibe dia ny nampahafantarana azy, nifanaraka, ary nahasarika. Ny tanjoko dia ny hamoaka ny zavatra any izay tian'ny olona hizara.
Ny zavatra mampalahelo dia ny fampiasantsika CMS tompony, noho izany tsy nanana bilaogy izahay, ny fanovana CMS tadiaviko dia olan'ny fampandrosoana, ary nitolona ny tranokala mba hahazo hery.
Search Engine Optimization = Tsara
Fikambanana mirotsaka ara-tsosialy = Tsara kokoa
Tsy gaga aho fa be dia be ny orinasa tsy manana bilaogy - mbola miaina mitady sy mamitaka an'i Google ny teknisianin'izy ireo, rehefa tokony hojerena ara-tsosialy ho fomba iray hampidirana ny mpanjifany sy ny mpanjifany.
22 Nov 2011 amin'ny 1:51 maraina
Tiako! Fikambanana mifarimbona ara-tsosialy> Fanatsarana ny motera fikarohana